September 12, 2019 - Myitter
September 12, 2019 Myitter 0
January 31, 2019 “ သွားနှင့်တော့ ကလေးရေ …. စိတ်မကောင်းဘူး ကလေး…. ဘာမဟုတ်တဲ့ အရာလေးအတွက်နဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမှန်း မသိဘူး ကလေးရယ်… သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က စနောက်ပြီး FB ပေါ် တင်လိုက်တဲ့ ပုံတစ်ပုံ […]
“ ရှင်းချင်ရင် ဒဲ့ရှင်းလို့ရတယ်“ ဆြိုပီး ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
“ ရှင်းချင်ရင် ဒဲ့ရှင်းလို့ရတယ်“ ဆြိုပီး ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်၏ မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ရွေးချယ်ပွဲ၌ စင်ပေါ်တွင် မုဒိမ်းမှုသရုပ်ဆောင်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်၍ ပန်ဆယ်လိုက စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် “ မုဒိမ်းမှုတွေ ပေါများနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ ဇာတ်ကွက်အား […]
သွေးချိုတက်စာတွေ များများစားလည်း တက်မလာတော့တဲ့ အကောင်းဆုံး ဆီးချိုကျ သဘာဝဓာတ်စာ
လွန်ခဲ့ တစ်ပက် တနလာင်္ နေ 27 .8 2018က ကျတော် မန်းလေးကညန ရုံးမှာ မတရားခံလိုက်ရတာပါ
လွန်ခဲ့ တစ်ပက် တနလာင်္ နေ 27 .8 2018က ကျတော် မန်းလေးကညန ရုံးမှာ မတရားခံလိုက်ရတာပါ ကျတော့ကိုလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးပေးမယ်ဆိုပြီး အောက်မှာပါတဲ့ အမျိူးသမီးသုံးယောက်က ပက်ဆံ 32000 လိမ်သွားတာပါ ကျတော် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖို့ ရုံထဲဝင်တဲ့အချိန်အောက်မှာပြတဲ့ အမျိုးသမီးသုံးယောက်က အဝင်ပေါက်မှာ မောင်လေး လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမယ်ဆို […]
ရင်​​လေးစ ရာ YBS ဒရိုင် ​ဘာ (ခရီးသ ည်​ အားလုံး ရဲ့ အသက် ​က သူ့အ​ပေါ် မူတည်​ပါတယ်​) ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အများအပြားဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သဘောမကျကြပါဘူး။ လူအတော်များများက စည်းကမ်း ထုတ်လိုက်ပြီ ဆိုရင်ကို တမျိုး ဖြစ်သွားပြီး […]
ဈေးက ဖော်မလင်ပါတဲ့ ငါး၊ ပုဇွန်တွေ ဝယ်လာမိရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ… ဘယ်တွေလုပ်သင့်လဲ… ဖော်မလင် ကို ဘယ်လိုရှောင် ကြမလဲ… အသား ငါး ပုဇွန် တွေကို အမြင်လပ်လပ်ဆပ်ဆပ် ဖြစ်နေအောင် ဖော်မလင် ထည့်တယ်.. အသီးအနှံ တွေကို လဲ ဖော်မလင်သုံးလာပြီ.. စစ်ဆေးမှုအားနည်းတဲ့ နိင်ငံတွေမှာ […]
“အားကိုးချင်စရာကောင်းတဲ့ ရဲတွေအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဒေါက်တာမြ၀တ်ရည်(ရုပ်သံ)”
Dr. Mya Wut Yee က သူ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူ ကျူးလွန်တဲ့ လူတွေ လိပ်စာ ရော နာမည်ရော စုံစမ်းပြီး ညကမှ ရဲဆီ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပေး အင်္ကျီအမည်းနဲ့ တစ်ယောက်က ရွာမအရှေ့ အင်းစိန် မှာနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ထွက် ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးသတ်တဲ့ (ရှောင်လို့ […]
မော်လမြိုင်မှ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုရှင် မိသားစုရဲ့ ကြည်နူးဖွယ် ကုသိုလ် အလှူ
မြင်ရကြည်နူး ဒီလ သိန်းတစ်သောင်းခွဲကံထူးရှင် မော်လမြိုင် ငန်းတေးအထက ခွဲ ကျောင်းမှ ကျောင်းလုပ်သား ကိုကျော်မျိုးဝင်းမိသားစုမှ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန် အလှူငွေ သိန်းတစ်ထောင်ကျပ် ဆရာဆရာမအားလုံးတဦးချင်းစီ အလှူငွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူအားလုံးတွက် ဗလာအုပ် ဘောပင် လှူတန်းခဲ့တယ် မြင်ရကြက်သီးထမိ ဝမ်းသာာမိ မုဒိတာပွားမိ ချမ်းသာခဲ့ကြပြီ ဘဝမမေ့ […]
“ဘူးလက်” လှဆွေကို ရှာမတွေ့သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ.. ဝရမ်းပြန်အပ်
နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေမှုဖြင့် တရားစွဲကာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသည့် လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း ဦးလှဆွေသည် ယခုထိ ရှောင်တိမ်းနေဆဲဖြစ်သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးထံ ယနေ့ ဝရမ်းပြန်အပ်လိုက်သည်။ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများရုံးထိုင်သည့် နေရာများအပေါ် အမေရိကန်က “ဗုံးကြဲ” စေချင်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ “အကုန်လုံးသေပါစေ၊ အေးရော” ဟု ရန်ကုန်မြို့လယ် ဩဂုတ်လ ဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင် […]